Kuqhume izibhamu kuboshwa amaciko abebhikisha - Ilanga News
Home Izindaba Kuqhume izibhamu kuboshwa amaciko abebhikisha
Kuqhume izibhamu kuboshwa amaciko abebhikisha
AMACIKO aKwaZulu-Natal abhikishe eThekwini efuna uhulumeni uvulele imicimbi. IZITHOMBE NGU: MTHOBISI SITHOLE
UPHELE sekumuncu umbhikisho wamaciko aKwaZulu-Natal izolo ngoLwesithathu avele avula “ifestiveli” phakathi emgwaqweni owuthelawayeka, uN3 ngasenxanxatheleni yezitolo, iPavilion, eWestville, eThekwini, njengendlela yokuzwakalisa ukukhala kwawo, efuna ukuba avunyelwe ukuba ahlele imicimbi njengoba kuvalwe izwe.
Kutheleke amaphoyisa kaMasipala weTheku zisabuya, amaciko enandisa, kwaqhuma izinhlamvu zenjoloba nesisi esikhalisa unyembezi, amaciko agcwala umgwaqo ebaleka amanye agcina eboshiwe.
La maciko avele amisa iloli elinesandisamsindo (sound system), zaduma ngoba ethi asekhathele wukubulawa yindlala.
Umgqugquzeli walo mbhikisho obuhlelwe yiCultural and Creative Industries Federation of South Africa, uThokozani “T’zozo” Zulu, uthe indlela uhulumeni obathatha ngayo, ubaphathisa okwezixhwa-nguxhwangu, bebe bengosomabhizinisi abaziphilisa ngomculo.
Uthi sekuphele izinyanga eziwu-8 bebulawa yinkemane. “Kuleli lizwe ukuze uzwakale kumele uze ubhikishe. Ukusebenza yilokhu sakugcina ngoZibandlela (December) nyakenye, kasikwazi ukuthi singaphila ngo-R20 000 kahulumeni izinyanga eziwu-8.
“Sisenkingeni, sidlelwa imizi nezimoto ngoba kayikho imali yokuphila. Izingane zethu zilambile nathi sifuna ukucatshangelwa.
“Kuyasixaka ukuthi kungani uhulumeni ungayikhulumi indaba yethu ekubeni siyikhokha intela, kodwa ukwazile ukuvula izikole, izinxanxathela zezitolo, amatekisi, izindawo zokuphuza nokunye,” kusho uT’zozo.
Uthi bafuna kuvulwe imicimbi, kodwa kulandelwe imigomo yokuzivikela njengoba kwenzeka nakweminye imikhakha yamabhizinisi. Uveze nokuthi bafuna iSABC idlale umculo waseNingizimu Afrika u-100%, ukuze kuzotholakala imali yama-royalty.
Uthi konke lokhu bakubhekise kuMengameli Cyril Ramaphosa. “Nasezindaweni zobumnandi sifuna uhulumeni welule isikhathi sokuvala, kube wu-12 ebusuku ngoba yonke le mithetho ayibekile icindezela amaciko,” kusho uT’zozo.
Amaciko athi afuna kuvunyelwe u-70% wabantu emicimbini. Athi nakhona ayawuzwela uhulumeni, empeleni kumele ngabe kugcwala phama ezinkundleni zemicimbi.
USihlalo weSouth African Arts and Culture Youth Forum KwaZulu-Natal, uMnu Sabelo Ngema, uthe ohlangothini lwabaculi aba-safufusa, nabo basenkingeni enkulu.
“Ematekisini kugcwele, nathi sifuna amalungelo ethu omculo, sikhululwe sisebenze ebhizinisini lethu,” kusho yena.
UNobhala we-CCIFSA, uHaward Msomi, uthe kuyiqiniso ukuthi bebengenayo imvume yokuvala umgwaqo, kodwa lokhu bakwenziswe yizikhalo zamaciko. Uthe bawunqumele izinsuku eziwu-10 uhulumeni ukuba uphendule odabeni lwamaciko.
Uveze nokuthi bazothatha ezinye izinyathelo uma kungenzeki lokho. Emacikweni abeyingxenye yalo mbhikisho kubalwa uZodwa Wabantu, uL’vovo, uQhosha, uT’zozo, uDj Tira, uHappy Gal, uMondli Mzizi, uJumbo, uDladla Mshunqisi ophenduke ihlaya lingakashoni ilanga kudlalwa ingoma yakhe ihambisana ne-video ekha phansi ngejubane ngesikh-thi sekufike amaphoyisa – uSandy B, i-Afro Soul, uDumi Mkokstad noDj Bhunu ukubala abambalwa.
Okhulumela umasipala weTheku, uMnu Msawakhe Mayisela, uthe lokhu okwenziwe ngamaciko wubuqhaza obuphindiwe.
“IMeya uMxolisi Kaunda iyakugxeka lokhu okwenzekile ukuthi abantu bazithathele umthetho. Kawukwazi ukuthi ungavala umgwaqo omkhulu kangaka oxhumanisa iTheku neGoli.
“Siyakuqonda ukuthi abantu balambile, kodwa mabangazenzeli umathanda ngoba bethi uhulumeni wethu uyalalela. Sithi mababoshwe bagwetshwe ukuze kunqandeke izinto ezifana nalezi.
“Ukungeneliseki kwamaciko akusho ukuthi sekumele avale ukusebenza kwezwe. Ukuvalwa komgwaqo u-N3 umzuzu owodwa, idolobha lilahlekelwa wumnotho omkhulu kabi, kanti abanye abantu bahamba kuwona lo mgwaqo ngezimo eziphuthumayo beyiswa ezibhedlela.
“Izwe kalivaliwe ngamabomu, uhulumeni uphephisa abantu,” kusho uMnu Mayisela.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala uthe kuboshwe abantu abawu-32 ngalo mbhikisho.
Previous articleKusolwa eyamatekisi kushona abathathu
Next articleUdalula imfihlo yokunqoba izicoco uPitso